by कालिका टाईम्स ४ कार्तिक २०७७ ०७:५० 20 October 2020 0144
काठमाडाैं । आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत गएरातिको खेलमा चेन्नाई सुपर किंग्सलाई राजस्थान रोयल्सले ७ विकेटले हराएको छ ।
चेन्नाईले पेश गरेको १२६ रनको लक्ष्य राजस्थानले १८ औं ओभरमा ३ विकेट गुमाएर भेटायो । अबुधाबीमा सोमबार राति भएको खेलमा राजस्थानका लागि जोस बटलरले नटआउट ७० रन योगदान गरे । कप्तान स्टिभ स्मिथ पनि २६ रनमा नटआउट रहे ।
राजस्थानको शुरुवात राम्रो थिएन । बेन स्टोक्सलाई तेस्रो ओभरमा दीपक चहारले आउट गरेका थिए । स्टोक्सले १९ रन बनाए । अर्को ओभरमा जोश हेजलवुडले रोबिन उथप्पाको विकेट लिए । ४ रन मात्रै बनाउन सकेका उथप्पा धोनीको हातबाट क्याच भए । पाँचौं ओभरमा दीपक चहारले सन्जु स्यामसनलाई धोनीकै हातबाट क्याच गराए । सन्जुले खाता नै खोल्न सकेनन् । तीन विकेट गुम्दासम्म राजस्थानको खातामा जम्मा २८ रन थियो ।
तर त्यसपछि भने कप्तान स्टिभ स्मिथ र जोश बटलरले खेलमा यूटर्न ल्याइदिए । यी दुईले चौथो विकेटका लागि ९८ रनको साझेदारी गरे । बटलर म्यान अफ द म्याच चुनिए ।
यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नाइ सुपर किंग्सले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १२५ रन बनाएको थियो । कप्तान धोनीले रविन्द्र जडेजासँग मिलेर पाँचौ विकेटका लागि ५१ रन जोडे ।
जडेजा चेन्नाईका टप स्कोरर रहे । ३० बल सामना गरेका उनले चार चौकाको मद्दतमा नटआउट ३५ रन बनाए । धोनीले २८ र साम कुरानले २२ रन जोडे ।
जारी आईपीएलमा यो राजस्थानको चौथो जित र चेन्नाईको सातौं हार हो । जितसँगै राजस्थानको टोली अंक तालिकामा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । महेन्द्र सिंह धोनी नेतृत्वको चेन्नाई अन्तिम स्थानमा छ ।
SQL requests:143. Generation time:1.440 sec. Memory consumption:16.52 mb